Ukuphononongwa kwendyikityha kunye namanqaku. I-COVID-19 ishukumisa umhlaba-i-Ikkaro
yokuqalisa >> Iincwadi >> Isifo esikho elizweni jikelele. ICOVID-19 ishukumisa umhlaba
Isifo esikho elizweni jikelele. I-COVID-19 ishukumisa umhlaba kaSlavoj Zizek
Ndithenge kwaye ndafunda esi sincoko xa sasipapashwa ngoMeyi, phantse ekuqaleni kwesifo. Bendifuna nyani ukufunda uZizek kodwa ndicinga ukuba ndifumene incwadi engeyiyo yokusondela kuye. Ubuncinci ndiyathemba ukuba ibiyincwadi kwaye ayingombhali.
Intuition yam indixelele lonto Kwakungengombono olungileyo ukufunda incwadi malunga ne-COVID-19 kunye nobhubhane ekuqaleni kwayo. Wayenazo zonke iimpawu zokuba ngumkhethi wemali. Kodwa kwelinye icala bendicinga ukuba ukusuka kwisithandi sobulumko esaziwayo ndingafuna ukufumana into esemgangathweni. Ndisacinga ukuba kunokwenzeka ukudala isilingo esifanelekileyo kwanakwiintsuku zokuqala zobhubhane. Nangona kungasekelwanga kwinto eyenzekileyo, ewe ngokuhlalutya iimeko ezahlukeneyo, iintlekele ezidlulileyo, njl.
Inyani yile yokuba le ncwadi ibe kukudana okukhulu oko Andikukhuthazi mntu. Phantse isiqhulo.
Kwakufana nokufunda iTwitter. Incwadi elula, ndizifundile zonke iziqhulo ezivele kwi-Twitter kunye nengxoxo encinci ngaphezulu kunakwinethiwekhi yoluntu. Ngokwenyani, kwezi zimvo zimbalwa azishiyayo, akukho nanye ephikiswayo, uyayishiya nje. Amagqabantshintshi asekwe kwidatha engachanekanga, ngaphandle komsonto, ngaphandle kwenjongo ecacileyo.
Kuyinyani ukuba kwavela kufundo Inkululeko kaLudovico Geymonat Umahluko awysmal. Kwincwadi kaGeymonat ubona ucwangco, ubume, iingxoxo kunye nenjongo ecacileyo yento afuna ukuyibonisa okanye ukuqiqa….
Ukufumana into eyakhayo ndiyakucebisa yintoni injongo yeenqobo ezisesikweni?
Kukho iikhonsepthi, azikhankanyileyo kule ncwadi ukuba kungoku nje kungamampunge ukuzichaza njenge "ngumkhuhlane nje." Ezi zizinto ekunokwenzeka ukuba ekuqaleni kobhubhane kungacingelwa ukuba kunjalo. Kodwa le yeyona ndlela iphosakeleyo yokuzama ukuhlalutya ubhubhane ngedatha ukuqala kobhubhane, kunokuba uzame ukuhlalutya iingxaki zokuziphatha okanye zefilosofi ezinxulumene nobhubhane kunye neentlekele ezinkulu.
Umyalezo wendalo yokuziphindezela, ngokungathi wayenguthixo olilungisa, uyathandeka mva nje. Olo tshintsho lothixo ngendalo. Kwaye nangona kuyinyani ukuba olu hlobo lobhubhane luyathandwa kukungena kwabantu kwindalo esingqongileyo, esi sifo sisiphumo sengozi, ingozi okanye intyatyambo yeorenji. Ayisiyonto ecwangcisiweyo yendalo ukubuyisela umlinganiso kunye nokuphilisa umhlaba.
Mhlawumbi le yeyona nto iphazamisayo esinokuyifunda kubhubhane wentsholongwane: xa indalo isihlasela ngentsholongwane, ikwenza oko ukubuyisela umyalezo wethu. Umyalezo ngulo: into oyenzileyo kum, ndiyenza kuwe.
Ndiyeka ukuthetha ngayo yonke into endingayithandiyo kwaye ndiyishiya njengesiqhelo amanqaku abambe umdla wam okanye endifuna ukuphanda ngayo.
Uthetha ukuthini ngezi meme?
URichard Dawkins ubanga ukuba ii-memes "ziintsholongwane zengqondo," zizinto ezinesiphene esithi "zenze ikholoni" ingqondo yomntu, ziyisebenzise njengendlela yokuziphindaphinda, umbono ovela ungabikho ngaphezulu okanye ngaphantsi kukaLev Tolstoy.
Ukuziphatha kwezoluntu kunye nokhathalelo lwabantu abadala kunye nabakhubazekileyo
Ngamafutshane, umyalezo wayo oyinyani kukuba kufuneka sinciphise iintsika zendlela yethu yokuziphatha: ukukhathalela abantu abadala kunye nababuthathaka. I-Itali sele ibhengeze ukuba ukuba izinto ziya zisiba mbi, abo bangaphezulu kweminyaka engamashumi asibhozo ubudala okanye abaphethwe zizifo ezinzulu esele zikhona baya kushiyeka bezimela. Kufanele ukuba siyamkele into yokuba ukwamkela ingcinga "yokusinda kwabona banamandla" kwaphula nomgaqo osisiseko wokuziphatha emkhosini, osixelela ukuba emva kwedabi, kufuneka kuqala sibakhathalele abo bonzakele kakhulu, naxa amathuba okubasindisa zincinci. Ukuthintela nakuphi na ukungaqondani, ndifuna ukubhengeza ukuba ndiyinyani ngokupheleleyo: kufanele ukuba silungiselele amayeza ukuze abo bagulela ukufa bafe kabuhlungu, ukubasindisa ekuhluphekeni ngokungeyomfuneko. Kodwa umthetho-siseko wethu wokuqala akufuneki ube kukugcina imali, kodwa kukunika uncedo olungenamiqathango, nokuba yeyiphi na inkcitho, kwabo bayifunayo, ukubenza baphile.
Uxanduva lomntu kunye neziko
Kwiintsuku zakutshanje, sive kaninzi ukuba ngamnye wethu unoxanduva kwaye kufuneka alandele imigaqo emitsha. Kumajelo eendaba sifumana amabali amaninzi abantu abangaziphathanga kakuhle ... Ingxaki koku ikwanjalo nangobuntatheli bokujongana nengxaki yokusingqongileyo: amajelo eendaba agxininisa uxanduva lwethu, efuna ukuba sinike ingqwalaselo engaphezulu ekuvuseleleni kunye neminye imiba yemicimbi yethu. indlela yokuziphatha.
I-Chascarrillo kwiTrump nakwintlalo-ntle
Njengoko isitsho intetho: ngexesha lentlekele sonke singoonontlalontle. Nokuba uTrump ngoku uthathela ingqalelo ifom yeNgeniso eSisiseko yeHlabathi: itsheki ye- $ 1000 kuluntu ngalunye lwabantu abadala. Izigidigidi zeedola ziya kuchithelwa ukophula yonke imigaqo yentengiso eqhelekileyo.
Kumyalezo wokulahla abantu abadala eMelika
Elona xesha kuphela kule minyaka idlulileyo apho kwenzeka into efanayo, kulwazi lwam, kule minyaka idlulileyo yoRhulumente waseCeausescu eRomania, xa izibhedlele zingazange zikwamkele ukwamkelwa kwabantu abathathe umhlala-phantsi, nokuba bakweyiphi na imeko, kuba khange baqwalaselwe. alunamsebenzi eluntwini. Umyalezo wezi zibhengezo ucacile: ukhetho luphakathi kwenani elininzi, nangona lingenakubalwa, lobomi babantu kunye neMelika (okt ingxowa - nkulu) Kolu lonyulo, ubomi babantu bulahleka. Kodwa ngaba kuphela kokhetho?
Isikhundla sabo bayibona le ngxaki njengethuba elingenakuphikiswa apho amandla ombuso kufuneka enze umsebenzi wawo kwaye silandela imiyalelo yawo ngethemba lokuba uhlobo oluthile lwesiqhelo luya kubuyiselwa kwikamva elingekude kakhulu yimpazamo. Kuya kufuneka silandele u-Immanuel Kant apha, owabhala ngokunxulumene nemithetho yelizwe: "Thobela, kodwa cinga, gcina inkululeko yokucinga!" Namhlanje sidinga ngaphezulu kunakuqala into uKant ayibiza ngokuba "kukusetyenziswa kwesizathu esidlangalaleni."
Izalathiso zebhayibhile zencwadi endiyifumanisa inomdla
UJane Bennett, uMbandela weVibran. Ibizwa ngokuba ngabathandi bezinto ezintsha
UMartien Mueller, "I-Assemblages kunye neActor-uthungelwano: UkuCinga kwakhona ngeeNtlalontle zaMandla, ezopolitiko kunye neZithuba", ecatshulwe kwi-http: //onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gec3.12192/pdf
URyszard Kapuściński, u-Shah okanye oGunyazisiweyo waMandla, iAkhawunti yoHlaziyo lweKhomeini e-Iran
Ukuziphatha kweCosmopolitan ngu-Adela Cortina
Elona bali lihle ehlabathini
1 Ngumkhuhlane nje
2 Impindezelo yendalo
3 Amanqaku anomdla
4 Izalathiso zebhayibhile zencwadi endiyifumanisa inomdla